စတား Discharge ပစ္စည်း
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စတား Discharge ပစ္စည်း(19 များအတွက်စုစုပေါင်း စတား Discharge ပစ္စည်း ထုတ်ကုန်များ)
စတား Discharge ပစ္စည်း - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ စတား Discharge ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား စတား Discharge ပစ္စည်း / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် စတား Discharge ပစ္စည်း များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
ကြယ်ပွင့်ဥတု device ကိုပရိသတျ
tag ကို: စတား discharge ပစ္စည်း , Lock ကို Valve ၏ဈေးနှုန်း , Botou Lock ကိုလေ Valve
သော့ခတ်အဆို့ရှင်များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များနေသောခေါင်းစဉ်: အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဂဟေဆော်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စစ်ဆင်ရေး, ကောင်းသောလုံစွမ်းဆောင်ရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အလိုအလျောက်သော့ခတ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။...
tag ကို: ချောမွေ့ Flat Air ကိုသံမဏိ Filter ကိုကေ့ , ဘဲဥပုံ Air ကို Cleaner ဖုန်ကောက်ခံရေး , welding Dedusting Filter ကိုအိတ်ကေ့
tag ကို: လျှပ်စစ်အရည်ကျိုမီးဖိုဖုန်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ , လျှပ်စစ်အရည်ကျိုမီးဖိုများအတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး , ဖုန်ကောက်ခံရေး၏ဈေးနှုန်း
သွေးခုန်နှုန်း deduster အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းမိုးရွာသွန်းမှုဟာ MC-ငါအမျိုးအစားပေါ်အခြေခံပြီးသစ်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်သွေးခုန်နှုန်းဖုန်မှုန့် remover ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့သန့်စင်ထိရောက်မှု၏အားသာချက်များ,...
tag ကို: Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner စက်ရုံ , Pulverized ကျောက်မီးသွေးပစ်ခတ်မှုများသည်စက်ရုံ , Pulverized ကျောက်မီးသွေး Burner စက်ရုံ
tag ကို: ကုန်ကြမ်းကျောက်မီးသွေးပစ္စည်း Pulverizing , ကုန်ကြမ်းကျောက်မီးသွေးနယ် , ကျောက်မီးသွေး Pulverized ကျောက်မီးသွေး Powder စက်
အဆို့ရှင် / rotary အဆို့ရှင်ပေါ်မှပစ္စည်းများချ
tag ကို: Stellate ကယ်ဆယ်ရေး Valve လှည့် , Rotary Valve / ချ Valve , Rotary Air ကိုဘရိတ်ကြှေးမှေး
tag ကို: လေပိုက်လုံးသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏အရောင်း , ဖုန်ဖယ်ရှားရေး၏အရောင်း , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး၏ရောင်းမည်
နေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေး လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအတွက်အပြောင်းအလဲတချို့, ဒါမှမဟုတ်တချို့မအောင်မြင်မှုများကြောင့်အိတ် filter ကို၏နေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းကပစ္စည်းကိရိယာရဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။...
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ aramid ပစ္စည်း ptfe အမြှေးပါးနှင့်အတူ nomex filter ကိုအိတ်
မော်ဒယ်နံပါတ်။: DS - 182
tag ကို: Nomex Filter ကို Bag , High Quality ဖုန် Bag , polyester / nomex / PPS / PTFE / FMS Bag Filter ကို
ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် Aramid filter ကိုအိတ် ptfe အမြှေးပါးနှင့်အတူ nomex filter ကိုအိတ်, ကြှနျုပျတို့ကျယ်ပြန့် theasphalt non-ferrous သတ္တုထုတ်လုပ်မှု, ကြွေ, ဖန် indutries, ဘိလပ်မြေစက်ရုံများအတွက်လညျးမီးဖိုနှင့်ပေါက်ကွဲမှုမီးဖိုသုံး aramid...
အိတ် FMS ပစ္စည်း filter ကိုအိတ်
tag ကို: မြင့်မားသောဖုန် Filter ကိုအိတ်စုဆောင်းခြင်း , PE polyester ဓာတုဖုန် Filter ကို Bag , polyester P84 ပိတ်စ Bag
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဘို့ FMS ပစ္စည်းစက်မှုလေထု filter ကိုအိတ် filter အိတ်မြေမှုန့် filter ကို၏အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ filter အိတ်အဲဒီလိုအပ်ချက်များကိုပုံမှန်လည်ပတ်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အိတ် filter...
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းများအတွက်ဖိုင်ဘာဖန်ပစ္စည်းအိတ် filter ကို
tag ကို: Ron Ore နယ်ဖုန် Bag Filter , သံမဏိစက်ရုံ၏မြေမှုန့် Filter ကို Bag , တုရုမြို့စက်ရုံ၏မြေမှုန့် Filter ကို Bag
တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းရေးဆွဲ အိတ်၏ဖွဲ့စည်းပုံကကိုက်ညီအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း၏စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပြာများသန့်ရှင်းရေး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသင့်တယ်, ထိုသို့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်, ပိတျထားသောအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော,...
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းဘိလပ်မြေ nomex filter ကိုအိတ်
tag ကို: ကွိဘူတာအဘို့မြေမှုန့်ငွေကောက်ခံ Bag , Shot ပေါက်ကွဲမှုစက်၏ဖုန်မှုန့်အိတ် , တုရုမြို့စက်ရုံအဝတ်အိတ် Dedusting
အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်နေကိစ္စရပ်များ 1) ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအချိန်ကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်အသစ်ကနည်းပညာ, အဟောင်းအထည်အိတ်နှင့်အတူရောနှောမဖြစ်သင့်ခြင်းနှင့်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အိတ်၏ 2) အိုမင်းခြင်း။...
လေထုမြေမှုန့်စုဆောင်းဘို့အပူ setting ကိုစစ်ထုတ်ပစ္စည်း
tag ကို: acrylic Bag အိတ် , မြင့်မားသောအပူချိန်ဖုန်ထူ Bag , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Bag
အထည်အိတ်ခွဲခြား 1. ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းများ ယက် filter ကိုအထည်, ဖုန်မှုန့်အိတ်, nonwoven filter ကိုအထည်နှင့် duster filter ကိုအိတ်: အအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းအရ, ကအဓိကအားဖြင့်သုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ 1, ယက် filter ကိုအိတ် filter ကို:...
စက်မှု filtration ပစ္စည်းကိရိယာများဖုန်မှုန့် filter ကိုစုဆောင်း
tag ကို: စက်မှု Filtration ပစ္စည်း , filter ပစ္စည်းကိရိယာဖုန် filter , ဖုန်မှုန့် Filtration ပစ္စည်း
အမြိုးခှဲခွားခွငျး ခွဲခြားခြင်းနှင့်အိတ် filter ကို၏သတ်မှတ်ချက်များ၏အမျိုးသားရေးစံချိန်စံညွှန်းများအရ, အိတ် filter ကိုငါးအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။ အဆိုပါသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းအိတ် filter ကို၏ခွဲခြား၏အဓိကအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ (1)...
ကြယ်ပွင့်ဥတု device ကိုပရိသတျ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကုန်ကြမ်းကျောက်မီးသွေးပစ္စည်းကိရိယာများ Pulverizing အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဆို့ရှင် / rotary အဆို့ရှင်ပေါ်မှပစ္စည်းများချ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Deduster လေကြောင်းပြွန်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများအားဖြင့်ရောင်းချ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူ aramid ပစ္စည်း ptfe အမြှေးပါးနှင့်အတူ nomex filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အိတ် FMS ပစ္စည်း filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းများအတွက်ဖိုင်ဘာဖန်ပစ္စည်းအိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းဘိလပ်မြေ nomex filter ကိုအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေထုမြေမှုန့်စုဆောင်းဘို့အပူ setting ကိုစစ်ထုတ်ပစ္စည်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု filtration ပစ္စည်းကိရိယာများဖုန်မှုန့် filter ကိုစုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale စတား Discharge ပစ္စည်း from China, Need to find cheap စတား Discharge ပစ္စည်း as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on စတား Discharge ပစ္စည်း produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our စတား Discharge ပစ္စည်း, We'll reply you in fastest.